Colourpop!!! - ♥ ♥ MY GREEN LIFE ♥ ♥
by Phyu Lwin on July 01, 2017
Good morning everyone! 💕
As all of you have noticed, I could have managed time to write something here very often. So now, time is coming to post one of my interests here 💥💥💥
အပေါ်က ပြောထားသလိုပဲ အချိန်ရတုန်းလေး စာတွေအများကြီးရေးဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ..။ နေ့တိုင်းရေးချင်ပေမယ့် အဲလိုတော့လည်း အချိန်မရှိသေးပြန်ဘူး...။ သွားရလာရ စားရသောက်ရသေးတာဆိုတော့လေ ..။ နောက်ဆိုရင်တော့ သွားလည်ခဲ့တဲ့နေရာက ဓါတ်ပုံလေးတွေ မျှဝေပေးပါမယ်နော် ..။ ဂျပန်အလည်လာချင်တဲ့သူအားလုံးလည်း ဘယ်လိုနေရာတွေက လည်ဖို့ကောင်းလဲဆိုတာ အကြုံရသွားစေချင်လို့ပါ ....။
လောလောဆယ် ဒီနေ့တော့ ဒီအတောအတွင်း ဝယ်ထားခဲ့တဲ့ Cosmetics တွေထဲက Brand တစ်ခုရဲ့ collection လေးတွေ ပြချင်လို့ပါ ..။ Colourpop က မြန်မာမှာလည်း ရှိပါတယ် ..။ Beautydiary မှာ ရောင်းတယ်ထင်တယ် ..။ သူက LA, USA made ဖြစ်ပြီး ဆိုင်တွေပေါ်မှာ မရောင်းဘဲ online ကနေပဲ ရောင်းတာပါ ...။ Kylie လိုမျိုးပေါ့...။ ဒါပေမယ့် Colourpop က အများကြီးကို ပိုဈေးချိုပါတယ် ...။ Instagram က Beauty blogger တော်တော်များများ သူ့ရဲ့ Lipstick တွေကို သုံးတာတွေ့ပြီးတော့ စမ်းသုံးကြည့်ချင်တာနဲ့ ဝယ်ရင်းဝယ်ရင်း များသွားတာ 😹 ။ ဒါတောင် ဟိုတလောက အမျိုးသားကဒီလိုအလည်လာတော့ သူပြန်သွားတုန်းက အစ်မနဲ့ညီမလေးအတွက် အများကြီးပေးလိုက်သေးလို့သာ။ မဟုတ်ရင် Colourpop တွေ တော်တော် စုမိနေဦးမှာ ...။
colourpop က အများအားဖြင့် 50USD နဲ့အထက်ဝယ်ရင် worldwide free shipping ရတယ် ..။ တခါတလေလည်း free shipping က မရတဲ့အခါလည်း ရှိတတ်တယ် ..။ ကျမကတော့free shipping ရတဲ့အချိ်န်ပဲ ဝယ်ဖြစ်ပါတယ် ...။ သူ့ရဲ့ Lipstick၊ shadow၊ highlighter တွေက အရမ်းလူကြိုက်များတယ် ..။Lipstick မှာမှ အမျိုးအစားအများကြီးထုတ်တယ် .။ Ultra matte lip, Ultra satin lip, Ultra blotted lip, Lippe stix, Ultra glossy lip, Ultra metallic lip စသဖြင့် ၈ မျိုးလောက်ထုတ်တယ် ..။ ကျမဝယ်ဖြစ်တာက Ultra matte lip, Ultra satin lip, blotted lip, Lippe stix ၄ မျိုးဝယ်ဖြစ်တယ် ..။matte lip တွေက အခုတလော အရမ်းခေတ်စားနေတာနဲ့ ဝယ်သုံးကြည့်ပေမယ့် နှုတ်ခမ်းမှာ သင်္ဘောဆေးသုတ်ထားသလို ခြောက်ခြောက်တင်းတင်းကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ ခံစားရလို့ နောက်ဆို ဘယ် Brand ကပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်မသုံးတော့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် ..။ ကျမက နှုတ်ခမ်းနီဆို အရမ်းစိုပြီး တောက်နေတာမျိုးမဟုတ်ပေမယ့် moisture ပါတာတော့ ကြိုက်တယ် ..။ အဲဒါကြောင့် ဒီ Colourpop ထဲကဆိုရင်Ultra satin lip, နဲ့ Lippe stix ကို အရမ်းကြိုက်တယ် ..။ တစ်ခုမှ ၆ ဒေါ်လာလောက်ပဲ ပေးရတယ် ..။
အခု ဝယ်ထားဖြစ်ပြီး ဆိုးဖြစ်နေတဲ့ နှုတ်ခမ်းနီလေးတွေ..။ နှုတ်ခမ်းကို ခြောက်ခြောက်ကပ်ကပ်ကြီးလည်း မဖြစ်စေသလို Gloss လိုမျိုး စိုရွှဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ ကြည့်လို့ကောင်းတယ်...။ သူ့မှာ အရောင်လေးတွေ ရွေးစရာအများရှိတယ် ..။ လုံးဝ nude color ကနေ black color အထိ shade အမျိုးမျိုးရှိတော့ ရွေးချယ်စရာတွေ အရမ်းများတယ် ..။
မြန်မာက ကျမရဲ့အစ်မက Lippe stix ကို ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ သူ့အတွက် ၆ ဗူး package တစ်ခု ဝယ်ထားပေးတာ.. ။ တကယ်တော့ ဒါကလည်း lipstick တစ်မျိုးပါပဲ..။နှုတ်ခမ်းကို မခြောက်စေဘဲ matte ပုံစံဖြစ်စေတာက သူ့ရဲ့လူကြိုက်များစေတဲ့အချက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ် ..။ တစ်ခုမကောင်းတာက နှုတ်ခမ်းနီအသားက အရမ်းနူးညံ့တော့ အရှည်ကြီးဆွဲထုတ်မိရင် ကျိုးသွားတတ်တယ်..။ အဲဒါကြောင့် ကိုယ်ဆိုးလို့ရလောက်မယ့် အရှည်လောက်လေးပဲ ဆွဲထုတ်ပြီးဆိုးရင်တော့ ကြာရှည်ခံမှာပါ ..။
နောက်တစ်မျိုး သူ့မှာ နာမည်ကြီးတာတစ်ခုက single eyeshawdow လေးတွေ။ တစ်ခုကို ၅ ဒေါ်လာဆိုတော့ ဈေးတော့ကြီးတယ်နော်..။ ဒီလေးခုဆို ဒေါ်လာ ၂၀ တောင် ကျသွားတယ်ဆိုတော့ ပုံမှန် eyeshadow palette တွေထက် ဈေးပိုကြီးသွားတာပေါ့ ..။ ၄ ခုဝယ်ရင် ဘူးလေးကတော့ လက်ဆောင်ရတာဆိုတော့ကာ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရောင်လေးတွေပဲ ဝယ်ပြီး customized palette လေး လုပ်လို့ရတာတစ်ခုပဲ တန်တယ် ...။ ဒါလေးတွေက matte type shadow လေးတွေ အရောင်ထွက်အားကတော့ တော်တော်မိုက်တယ် ...။ အမှုန်တွေလည်း မကျသလောက်ပဲဆိုတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးမှ ဒါတွေကိုလိမ်းလည်း အဆင်ပြေတယ်...။ ဒီတလောမှာ matte type shadow တွေ ခေတ်စားနေတော့ လူတိုင်းက shimmer ပါတာတွေကို သိပ်မဝယ်ကြတော့ဘဲ matte တွေကို ဝယ်ကြတာ တွေ့မိတယ် ..။ သူတို့တွေက နေ့စဉ်သုံးဖို့လည်း အဆင်ပြေတာကိုး.. နော်...။ အရောင်ပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေက ပွဲတွေဘာတွေမှသာ ပိုအဆင်ပြေတာဆိုတော့ နေ့စဉ်သုံးဖို့အတွက် သိပ်မလိုဘူးမလား...။
shimmer ပါတဲ့ eye shadow တွေကို တော်တော်များများက သိပ်မရွေးချယ်ဖြစ်ကြတော့ဘူးဆိုပေမယ့် ကျမကတော့ အခု Colourpop ရဲ့ super shock shadow လေးတွေကို တော်တော်သဘောကျမိတာနဲ့ အများကြီးဝယ်ထားမိသွားတယ် .. 😆😆။ သူ့ရဲ့အရောင်လေးတွေက အခြားမှာမတွေ့ဖူးတဲ့ အရောင်ဆန်းဆန်းလေးတွေ..။ အရောင်မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်းတွေ တွေ့နေရတာများလာတော့ အခုလို အရောင်လွင်လွင်ဆန်းဆန်းလေးတွေ ပြန်သုံးချင်လာလို့ ကြုံတုန်း အများကြီးဝယ်ထားမိတာရယ် ..။ package ကလေးတွေကလည်း အရမ်းမိုက်တယ် ...။ တကယ့်ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် လှလှပပလေးတွေဆိုတော့ အရမ်းသဘောကျတယ်...။ တစ်ဗူးချင်းဆို ၆ ဒေါ်လာလောက်ရောင်းတာမှာpackage လိုက်ဆို တစ်ဗူးကို ၄ ဒေါ်လာလောက်ပဲ ပေးရတော့တယ် ..။ များသွားတယ်ဆိုပေမယ့် ကိစ္စတော့မရှိပါဘူး..။ မြန်မာပြန်ရောက်ရင် လက်ဆောင် တစ်ယောက် တစ်ဗူးဆီ ပေးလိုက်ရုံပဲ 😍😍😍။ ဒီ shadow လေးတွေရဲ့ အရောင်ထွက်အားလည်း အရမ်းမိုက်သလို သူ့ရဲ့ texture ကလည်း နုနုအိအိလေး။ နုရွနေတာဆိုတော့ အမှုန်ထွက်မှာ ကြောက်ရပေမယ့် တကယ်သုံးတော့ လုံးဝအမှုန်မထွက်ပါဘူး...။ လက်ကလေးနဲ့လိမ်းလိုက်ရင်ကို တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်..။
ဒီလိုမျိုး Highligher လေးတွေလည်း တော်တော်ကောင်းတယ် ..။ တကယ်ကို highly recommended ပါပဲ ..။ သူများတွေလိုတော့ သိပ်မပြောတတ်ပေမယ့် တကယ့် ဈေးကြီးတဲ့ brand တွေရဲ့ Highligher တွေနဲ့ ယှဉ်နိုင်ပါတယ် ..။ ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတွေလို မျက်နှာပြောင်ပြောင်ဝင်းဝင်းလေးဖြစ်ချင်ရင် super shock cheek လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ ဒီHighligher လေးတွေကတော့ တကယ်အထောက်အကူပြုမှာပါ ..။ သူ့မှာလည်း အရောင်မျိုးစုံရှိတာဆိုတော့ ကိုယ့်သဘောကျတဲ့အရောင်လေးတွေကို စိတ်ကြိုက်ဝယ်လို့ရပါတယ်..။ တစ်ခုကို ၈ ဒေါ်လာတော့ ပေးရတယ်...။
colourpop က shipping လည်း အရမ်းမြန်တယ်..။ ရုံးဖွင့်ရက်ဝယ်တယ်ဆိုရင် ချက်ချင်းပို့တာဆိုတော့ တစ်ပတ်လောက်ပဲကြာပါတယ်..။ shipping information ကလည်း အချိန်နဲ့အမျှ update လုပ်တာဆိုတော့ ရောက်မယ့်အချိန်ကို ကွက်တိမှန်းနိုင်တဲ့အခါ အဆင်သင့်စောင့်နေလို့ရတော့ အချိန်ကုန်သက်သာပါတယ်...။
တကယ်တမ်းတော့ ဟိုးတလောက thesis ရေးနေတုန်း အပြင်လည်း မထွက်ဖြစ် stress တွေ အရမ်းများနေတဲ့အချိ်န်မှာ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာအောင် ဝယ်ဖြစ်သွားတဲ့ cosmetics တွေရယ်..။ အချိန်က မရတော့ မိတ်ကပ်တောင် မလိမ်းဖြစ်ဘဲ နှုတ်ခမ်းနီတစ်မျိုးပဲ ဆိုးဖြစ်နေပေမယ့် eye makeup တွေ အများကြီးစုမိနေတာာ။နောက်မှ သုံးဖြစ်နေတဲ့ Daily used cosmetics လေးတွေ လာ share ပါဦးမယ်နော်..။
Thank you for visiting here 💕😻😻😻😻